Xiisaddii xadka Jabuuti & Eritrea oo soo noolaatay, ka bixitaankii Qadar ka dib – Kasmo Newspaper
Xiisaddii xadka Jabuuti & Eritrea oo soo noolaatay, ka bixitaankii Qadar ka dib
Updated - June 18, 2017 4:56 pm GMT
London (Kasmo), Xiisaddii colaaleed ee ka dhaxaysay dalalka Jabuuti iyo Eritrea ayaa dib u soo noolaatay, waxayna ka dambaysay markii Qadar ciidankeedii Nabad-ilaalinta ee xadka 2da dal kala baxday.
Go’aanka Qadar waxaa 14kii Juun kaga dhawaaqay Dooxa, Wasiirka Arrimaha Dibadda, iyada oo labada dalba lagu wargaliyay in Qadar ahayd dhexdhexaadiye an dhanna raacsanayn.
Jabuuti iyo Eritrea waxay labaduba la safteen Sacuudiga iyo xulufadiisa, markii la go’doomiyay Qadar 5tii Juun, waxayna halkaasi ku waayeen ciidankeedii nabad-ilaalinta ee ku kala dhex jiray, si loo xakameeyo colaadda labadaas dal.
Xiisadda 2da dal ayaa soo bilaabatay sannadkii 2008dii, markaas oo mas’uuliinta Jabuuti ku eedeeyeen Eritrea in ay ciidankeeda soo dhoobtay xadka, shaqaaqooyin maalmo yar socdayna ku dhinteen dhowr askari oo reer Jabuuti ah.
Ciidanka Nabad-ilaalinta Qadar waxay tan iyo 10kii Juun 2010kii ku sugnaayeen xadka 2da dal ee Raas Dumaira, si ay Qadar isugu daydo dhexdhexaadinta labadaas dal, laakiin markii ay ka baxeen, 12-13kii Juun, Eritrea ayaa markiiba soo buuxisay buuralayda xadka ah.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti, Maxamed Cali Yuusuf ayaa 16kii Juun ku eedeeyay Eritrea in ay la wareegtay dhulka xuduudka ku dhow ee ciiddankii Qadar ka baxeen. Ururka Midowga Afrika ayaa Sabtidii soo dhexgalay isla markaasna sheegay in guddi xaqiiqo raadin ah oo soo qiimeeya xaaladda loo dirayo xadka labada dal, wuxuuna codsaday in xiisadda la qaboojiyo.
Jabuuti waxay bahwadaag muhiim ah la tahay reer Galbeedka, waxaana ku yaalla Saldhigyada Militari ee Maraykanka iyo Faransiiska, waxayna xuduud la leedahay Itoobiya oo ah jaalka ugu weyn Maraykanka ee Gobolka.
Eritrea heshiis hagaagsan lama laha reer Galbeedka, waxaana lagu eedeeyaa in ay soo dhoweyso kooxaha hubaysan ee argagixisada Al-Shabaab oo dagaalka ka wada Soomaaliya, eedahaas oo ay mar kasta iska fogayso.
Laakiin Qarammada Midoobay ayaa Eritrea ku soo rogay cunaqabatayn, 23kii Disembar 2009kii, sababtaas iyo xitaa xiisadda kala dhaxaysa Jabuuti darteed. Cunaqabatayntaas waxaa sannadkii 2011kii lagu sii giijiyay Qaraarka 2023 ee Golaha Ammaanka, soona baxay 5tii Disembar ee isla sannadkaas.